Kulan Wadatashi ah Oo Ay Yeesheen Xukuumada Iyo Odayaasha - Cakaara News
Kulan Wadatashi ah Oo Ay Yeesheen Xukuumada Iyo Odayaasha
Jigjiga(Cakaaranews) Sabti, 24ka September 2016. Waxaa maanta madasha shirarka ee qaryaan dhoodaan kadhacay kulan wadatashi ah oo ay yeesheen xukuumada DDSI iyo odayaal kasocday degmooyinka iimay, qalaafo, mustaxiil iyo feer-feer.
Kulankan ayaa waxaa hogaaminayay wasiir kuxigeenka xafiiska maamulka DDSI mudane Ibraahin Aadan Mahad, hogaan kuxigeenka xafiiska nabadgelyada, maamulka iyo cadaalada DDSI mudane Ibraahin Maxamuud Mubaarak iyo wasiirka xafiiska xeer-ilaalinta iyo cadaalada guud ee DDSI mudane Cabdijamaal Axmed Qaloonbi iyadoo dhankoodana ay kasoo qaybgaleen odayaasha degmooyinka iimay, qalaafo, mustaxiil iyo feer-feer oo ay hor-socdeen mudane Xaaji Cabaas Xaaji Maxamed, mudane Cabdi Cumar, mudane Maxamed Ciise Yoonis iyo mudane Cabdirisaaq Xuseen Burqa.
Hadaba kulankan ayaa waxaa lagaga wada hadlay sidii loo sii xoojin lahaa xaaladaha nabadgelyada gaar ahaan dhanka xuduuda dheer ee deegaanku laleeyahay wadamada dariska ah, horumarka laxaadka leh ee kataabagalay deegaanka iyo nidaamka maamulka suuban iyadoo khaasatan diirada lagu saaray ladagaalanka ururada xag-jirka ee diinteena islaamka gabbaadka kadhiganaya.
Dhankoodana odayaashan oo qiray horumarka, nabadgelyada iyo maamulka suuban ee guud ahaanba deegaanka kahanaqaaday ayaa sheegay inay garab-taagan yiihiin xukuumada iyo XDSHSI islamarkaana ay udiyaar u yihiin inay kalaqayb qaataan waxqabadyada balaadhan. Waxayna balanqaadeen inay sii xoojinayaan hawlaha lagu dar-dargalinayo fulinta qorshayaasha horumarineed ee sanadka 2009TI iyo waliba ladagaalanka ururada xagjirka ah sida: Daacish, Takfiir, Al-qushaash, Al-itaxaad, Ubbo, Khawaarij, Shiico IWM ee huwan diinta islaamka balse garab marsan. Waxayna intaa kudareen, inay bulshada degmooyinkaas ay uqaban doonaan kulamo wacyi-galin ah oo balaadhan islamarkaana ay hoos udhaadhicinayaan waxqabadka xukuumada iyo XDSHSI.
Ugudanbayna, kulankan ayaa galabta kusoo dhamaaday guul iyo niyad kamidaysan sidii bulshada deegaanka lagaga saari lahaa saboolnimada islamarkaana lagu gaadhsiin lahaa horumar aan dib u noqosho lahayn.